ချစ်သူအောင်လရဲ့အကောင့်မှာ မအလ ပုံချိန်းထားခြင်းရဲ့နောက် ကွယ်က အကြောင်း ရင်းမှန်ကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း – Maythadin
May Thadin | September 16, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် မင်းသမီးဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့ အနုပညာနယ်ပယ်နှစ်ခုလုံးမှာ အောင်မြင်သူနာမည်ကျော်အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဆိုလည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး
နာမည်ကြီး အဆိုတော် အောင်လနဲ့ချစ်သူသက်တမ်းကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှ အတူတူဂီတအနုပညာဘက်ကို ပိုအသာပေး လုပ်ဆောင်ကာ အောင်မြင်မှုတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားသူလည်း ဖြစ်ပါသေးတယ်
ချစ်စရာကောင်းပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Relationshipမို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အထူး နှစ်ခြိုက်သဘောတူမှုတွေကိုရရှိထားကြသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အမြဲအတူရှိကာ အဖြစ်အပျက် တိုင်းကို ပရိသတ်တွေဆီ ပြောပြတတ်သူ ဝိုင်းစုကဒီကနေ့မှာလည်း အောင်လရဲ့ Official Account Hackခံထားရတဲ့ အကြောင်းကို “ ကိုအောင်လအကောင့် hackခံထားရပါတယ်။
အခု အကောင့်ကိုပြန်လိုက်ယူဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် အထင်လွဲ အမြင်လွဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ရော စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှု့ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်လာခဲ့ပါတယ်.။
အကောင့် Hack ခံထားရချိန် အထင်အမြင်လွဲမှားအောင် ပို့ခံ ပြောခံထားရသူတွေကိုတောင်းပန်တဲ့ စာလေးကိုသူမရဲ့လူမှု့ကွန်ရက်မှာတင်ကာ တောင်းပန်စကားဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာကျန်းမာတဲ့ နေ့ရက်တိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။
ပရိသတ္ႀကီးေရ အဆိုေတာ္ မင္းသမီးဝိုင္းစုခိုင္သိန္းကိုေတာ့အထူးအေထြမိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေအာင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။
ဝိုင္းစုခိုင္သိန္းကေတာ့အႏုပညာနယ္ပယ္ႏွစ္ခုလုံးမွာ ေအာင္ျမင္သူနာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ဆိုလည္း မွား မယ္ မထင္ပါဘူး.
နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္ ေအာင္လနဲ႕ ခ်စ္သူသက္တမ္းၾကာျမင့္လာတာနဲ႕အမွ်အတူတူဂီတအႏုပညာဘက္ကိုပိုအသာေပး လုပ္ေဆာင္ကာ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုသိမ္းပိုက္ထားသူလည္း ျဖစ္ပါေသးတယ္.
ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦး နားလည္မႈေတြနဲ႕ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ Relationshipမို႔ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အထူး ႏွစ္ၿခိဳက္ သေဘာတူမႈေတြကိုရရွိထားၾကသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.
တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ အၿမဲအတူရွိကာအျဖစ္အပ်က္ တိုင္းကိုပရိသတ္ေတြဆီ ေျပာျပတတ္သူ ဝိုင္းစုက ဒီကေန႕မွာလည္း ေအာင္လရဲ႕ Official Account Hack ခံထားရတဲ့ အေၾကာင္းကို “ကိုေအာင္လ အေကာင့္ hackခံထားရပါတယ္။
အခု အေကာင့္ကိုျပန္လိုက္ယူဖို႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္ အထင္လြဲ အျမင္လြဲျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ေရာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္သြားတဲ့သူေတြ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကို ေတာင္းပန္ပါတယ္ရွင့္” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕လူမႈ႕ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္.။
အေကာင့္ Hack ခံထားရခ်ိန္ အထင္အျမင္ လြဲမွားေအာင္ ပို႔ခံ ေျပာခံထားရသူေတြကို ေတာင္းပန္တဲ့ စာေလးကို သူမရဲ႕ လူမႈ႕ကြန္ရက္မွာတင္ကာ ေတာင္းပန္စကားဆိုလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္.ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာက်န္းမာတဲ့ ေန႕ရက္တိုင္းကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္.။
မြန်မာ နိုင် ငံ က ပျောက် ချင်းမလှ ပျောက် နေကြတဲ့ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များ